Sida looga hortago bisadaydu inay ka baxdo guriga | Bisadaha Noti
Sida looga hortago bisadaydu inay ka baxdo guriga
Sidee looga ilaaliyaa bisadaydu inay ka baxdo guriga? Taasi waa su'aal dhammaanteen la nooleyd doofaarro ay isweydiiyaan waqti ka waqti. Waana taas, si kasta oo aan u hibeyno isaga, si kasta oo aan kalgacal u siino, xiisaha uu dareemayo ayaa ku kaxayn doonta inuu ka baxo albaabka isla marka uu fursad helo, sax?
Hagaag, runtu waxay tahay inay kuxirantahay. Dhab ahaantii haa Waxaan sameyn karnaa waxyaabo badan si aan dhogorta ugu dareemo inay guriga aad ugu raaxeysaneyso oo aysan u baahnayn baahidaas xoog leh ee ay dibadda ugu baxaan, markaa way fududaan doontaa in la xakameeyo. Miyaadan i rumaysan doonin? Sii wad akhriska, tusaalooyinkaan tijaabada waxaadna arki doontaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad ka daahidoonto inaad bilawdo inaad dareento isbeddelada dhogortaada.
1 Sida loo sameeyo bisadaada inaysan rabin inay ka baxdo guriga
1.2 Jadwalka joogtada ah
1.3 Sii wax kasta oo uu u baahan yahay
1.4 Waqti la qaado bisaddaada
1.5 La seexo isaga
1.6 Sii lammaane
1.7 Ilaali bisadaada
2 Mudo intee le'eg ayaad kaligaa uga bixi kartaa bisaddaada?
3 Maxaa la sameeyaa haddii aad tagto fasax?
Sida loo sameeyo bisadaada inaysan rabin inay ka baxdo guriga
Bisadaha (gaar ahaan ragga iyo xitaa haddii ay dhexdhexaad yihiin), waxaa laga yaabaa inay baahi u qabaan inay baxaan oo ay adduunka ka sahamiyaan. Inkasta oo haddii aad raacdo talooyinka soo socda, waxaad ogaan kartaa in si lama filaan ah, bisaddaadu ay rabto inay guriga joogto maxaa yeelay wuxuu leeyahay wax kasta oo uu u baahan yahay.
Bisaduhu waa noole bulsheed oo u baahan kicin iyo is dhexgal, sidaa darteed haddii aad tan bixiso maalin kasta, ma dareemayaan baahida loo qabo inay dibadda u baxaan oo ay raadiyaan. Waqti la qaado xayawaankaaga maalin kasta, mudnaanta tan ku qor liiskaaga maalinlaha ah! Waxaa jira calaamado kuu sheegi kara in bisadu aad cidlo u tahay:
Kuu raacayaa adiga guriga dhexdiisa oo si joogto ah u raadiyaa fiiro gaar ah
Kaadida waxyaabahaaga si aad u muujiso inuu kugu waalanayo
Qurxinta xad dhaafka ah
Bisaduhu, sida dadka oo kale, waa nolol caadi ah. Tani waa sababta ay ugu baahan yihiin nolol maalmeedkooda iyo inay garab ahaadaan. Soo toosi, waqti wax la cuno, iwm. Waxay jecel yihiin gurigooda iyo haddii howlahooda caadiga ahi wax iska beddelaan, bisaddaadu waxay dareemi kartaa culeys ama xitaa walaac. Beddelida jadwalka iyo ka tagida bisadda kaligeed muddo dheer sidoo kale waxay noqon kartaa waayo-aragnimo isbeddel aan caadi ahayn oo joogto ah iyo helitaanka hab lagu beddelo taas adoo dibedda u baxa.
Sii wax kasta oo uu u baahan yahay
Sii isaga ciyaar, kalgacal, wehel, nolol maalmeed, wehel bisad haddii ay suurta gal tahay ... bisaddaada, haddii uu dareemo gebi ahaanba raaxo leh oo gurigaaga lagu kiciyo, ma dareemi doono baahida loo qabo inuu ka baxo guriga. Intaas waxaa sii dheer, in banaanka loo soo saaro waa inuu u nuglaado halista wax xun oo ku dhaca isaga, sida shil, dagaal u dhexeeya bisadaha, jirro, gaari ku dhaco, iwm.
Waqti la qaado bisaddaada
Isku mid maahan inaad qolka ku dhex jirto, adiga oo ku fadhiya kursiga kuraasta iyo bisaddaada dabaqa, in aad labadoodaba ku wada joogtaan kursiga kuraasta ama dabaqa oo is dhexgalaya. Waxaa jira dad u maleeya in bisadu aysan u baahnayn feejignaanta noocan ah, inay aad u madaxbannaan tahay iyo in lagu farxo ay iyadu ku filan tahay nafteeda, laakiin inay u maleeyaan inay taasi tahay qalad.
Haddii aadan la falgalin isaga, haddii aadan la ciyaareynin iyo haddii aadan siinaynin kalgacal, kama filan karno inuu doonayo inuu nala joogo markaan dareenno. Sidaa darteed, haddii aan rabno inay noqoto bisad faraxsan, iyo sidoo kale bulsheed, waa inaan ku bixino waqti badan intii aan kari karno. Intaas waxaa sii dheer, waa inaan ogaano in xarig fudud ama kubad yar yar labadiisaba aniga iyo waxaan qaadan karnaa waqti fiican.
La seexo isaga
La seexashada bisad? Haa maxaa diidaya? Haddii aad ka walwalsan tahay dulinka, rugaha caafimaadka xoolaha iyo dukaamada xayawaanku waxay iibiyaan antiparasitics oo ka takhalusi doona dulinleyaasha dibadda (shilinta, boodada, iwm.) iyo sidoo kale kuwa gudaha (Dhul gariir). Haddii ay dhacdo inaad haysato xasaasiyadda xayawaanka ama in dhogorta xanuunsan tahay, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa noqon doona inaad iska ilaaliso inaad sariirtaada fuusho, laakiin haddii kale ... la seexashada bisad waa cudurdaar qumman oo lagu xoojiyo xiriirka.
Bisadna habeenkii ay la seexato dadkeeda, waa dhogor aad u badan oo dareemeysa jacayl aad u badan. Markaa uma baahnid inaad kalgacal dibadda ka raadsato.
Ilaa iyo inta aan awoodno, iyo inta aan leenahay bisad caan ah, waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay in la siiyo wehel bisad oo uu ku ciyaari karo intaan tagnay, oo maxaan sidaa u oranayn? Markaa guryuhu wuxuu ka labanlaabmayaa. Aniga qudhaydu waxaan la noolahay 5 gabdhood oo inkasta oo ay fasax u haystaan ​​inay banaanka u baxaan maaddaama aan ku nool nahay xaafad deggan, waxay aadayaan xoogaa subaxdii ah iyo galab kale oo yar, oo maalinta inteeda kale waxay ku qaataan hurdo iyo ciyaaro.
Kan ugu yar (Sasha, oo dhashay 2016, iyo Bicho, 2017) ma baxaan gabi ahaanba, waana farxad inaad aragto iyagoo ordaya. Marka dadka waaweyni yimaadaan (Keisha oo 7 jir ah, Benji 5 jir ah, iyo Susty oo 11 jir ah), waxay u dhaqmaan sida qoys isku dhow; si fiican u dhow. Runtu waxay tahay in Susty uu ka jid badan yahay guriga, waana mid aad iyo aad u madax bannaan. Laakiin kuwa kale waxay leeyihiin waqti fiican.
Marka, runtii, haddii aad daryeeli kartid bisad labaad oo aad xiisaynayso qoyska sii kordhaya, ha ka waaban. Dabcan, si wax walboo sifiican uga socdaan maalinta koowaad, waxaan kugula talinayaa inaad raacdo taladeena.
Haddii aynaan ugu talo gelin in bisadu waligeed ka baxdo guriga, ama waxaan ku noolahay magaalo ama magaalo aad u dad badan, ama waxaan ka walwalsanahay inay wax ku dhici karaan, waa inaan sameynaa wax kasta oo macquul ah si aan uga hortagno inay baxdo . Sideese taas loo sameeyaa? Shabaq saarida daaqadaha in aan ka heli karno iibka dukaamada wax soo saarka xoolaha, mid jidheed iyo mid khadka toos ahba. Halkan waxaan kaaga tagi doonaa dalabyo si aad si fudud ugu hesho:
PiuPet® - Netka Bisadda ...
Bella & Balu Red oo loogu talagalay ...
Libaaxto by dibea Red for ...
sidoo kale, waa inaan albaabka guriga marwalba ha xirnaado, Maaddaama ugu yar ee taxaddar la'aanta dhogorta ay bixi karto.
Mudo intee le'eg ayaad kaligaa uga bixi kartaa bisaddaada?
Mid ka mid ah sababaha ay bisadu u rabto inay guriga uga baxdo ayaa ah iyada oo kaligeed ah una baahan inay khibrado yeelato. Marka lagu daro tixgalinta talooyinka aan kor kuusoo gudbinay ee ah inay fikrad fiican tahay inaad bisad wehel u noqotid bisadaada iyo inay iska ilaaliyaan shirkad kasta oo kale marka aadan joogin, sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaato inta ay tahay inaad ka tagto bisaddaada kaligeed, haddii ay dhacdo inaadan haysan karin wax ka badan hal bisad sabab kasta ha noqotee.
In kasta oo ay run tahay in bisaduhu caan ku yihiin madax-bannaanidooda, haddana xaqiiqadu waxay tahay inay u baahan yihiin shirkad iyo kalgacal markasta. Haddii ay waqti dheer ku qaataan keligood guriga, waxay noqon karaan kuwo aan faraxsanayn oo xitaa niyad jabi kara.… Waana sabab ay qaarkood u cararaan ama ay u doonayaan inay guryahooda uga baxaan.
Dhab ahaantii waxna ma dhacaan maxaa yeelay waxaad uga tagaysaa iyaga maalin ama laba maalmood oo keliya haddii ay baahiyahooda aasaasiga ah la daryeeloLaakiin waqti dheer waxay ku heli karaan waqti adag shucuur ahaan iyo in ka badan haddii aysan lahayn saaxiibkood. Bisaddaadu maahan in keligeed loo daayo waqti dheer.
Haddaad fasax aaddo uma baahnid inaad bisaddaada kaligeed ka tagtid muddo dheer maxaa yeelay inkasta oo ay marin u leedahay qashinkeeda, biyaha iyo cuntada, waxaa jira sababo kale oo ku kalifikara inay ku kalifto inay ka tagto gurigaaga oo ay adduunka baarto.
Maxaa la sameeyaa haddii aad tagto fasax?
Haddii, tusaale ahaan, bisaddaadu ay leedahay cudur dabadheeraad ah oo ay u baahan tahay dawo, waxa ugu habboon ayaa ah in looga tago gacmo wanaagsan sida isbitaalka xoolaha oo ay ku siin karaan dhammaan daryeelka ay u baahan tahay.
Fikrad kale ayaa ah haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo guriga waqti dheer oo bisaddaada aysan qabin wax cudurro raaga, waxaad usheegi kartaa asxaabtaada ama deriskaaga inay ku ag istaagaan gurigaaga si ay u daryeelaan bisadaada. Waa xulashada ugu dhibka yar bisadda waana tan faa iidada ugu badan kuu leh. Waxa kale oo aad bixin kartaa kharashka xayawaan xirfadlayaal ah oo lagu kalsoon yahay si uu kuugu daryeelo bisadda gurigaaga intaad maqantahay.
Waxaan rajaynayaa inay kuu anfacday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sida looga hortago bisadaydu inay ka baxdo guriga
Waad salaaman tihiin, bisaduhu waa i xiisaynayaan waxaanna haystaa laba, mid yar oo saddex bilood jira iyo mid afar jir ah oo iyagu isma jecla, kan yar ayaa aad u masayr badan, ma arki karo inaan siiyo kalgacalka midka weyn, wuu helayaa inuu qaniino, haddii aan dhibaatadaas haystona wax badan buu caashaqaa laakiin kaliya markaan isku koolkooliyo oo ay iga lumiyaan taasna waa xanuun badan tahay miyaan u xiisay mid xitaa isku waqti aan u ooyo isaga markaan xusuusto, waan jeclahay dhaleeceynta xitaa haddii ay iga dhigaan masiibooyin.
Jawaab Gloribel Perez Hernandez
Seddex bilood markay jirtaan ayaa bisadu dooneysaa inay ciyaarto, tanina waxay ka keentaa nibbles waxayna dhibtaa qofka weyn maxaa yeelay… waa eey. Waqti ka dib, bisadda weyn waxay awoodi doontaa inay joojiso cagihiisa (ama halkii, cagihiisa). Adiguba waad bari kartaa qaniinin horeba ha xoqin samir iyo dulqaad.
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad (lab) ah oo sanad un jirsanaysa, laakiin isagu aad buu u baadi, hooyaday waxay bilowday inay necbaato maaddaama bisadu timo ka buuxdo laakiin ... maalin maalmaha ka mid ah ayaan u kaxeeyey barxadda ka dib waxaan u daayay inuu banaanka u seexdo Bisadu waxay bilawday inay laqabsato laakiin waxay ahayd qiyaastii 15 maalmood oo keliya, ka dib waan maydhay isaga iwm iwm oo markale ayaan u ogolaaday laakiin dhibaato kale ayaa bilaabatay, hadana waan soo saaray mar labaad .. Laakiin hadda wuu eryanayaa bisadaha waxaan u dul dhigay dharkiisa qabow dartiis waxaan uga tagayaa kalsiisa aad u diirran iyo Cuntada si fiicanna waxaa u jooga bisado u yimaada inay ka saaraan oo ku soo duulaan taasna ay keento inay dagaallamaan, laakiin tan iyo markii Bisadu aad ayey u kharribantahay, ma dagaallamo sababta oo ah mararka qaarkood way dhaawaceen isaga iyo sidoo kale bisad iyada oo aan rabin inay uur yeelato way garaacaysaa markaa maxaa yeelay markii aan bilaabay inaan arko dhibka noocaas ah illaa aan hooyaday u sheegayo inay waxyeelleeyeen, markaa waxaan go aansanay inaan xafidno habeenkii (waxaan leenahay aqal ku yaal beerta), halkaasna wuxuu ku bilaabay deganaan laakiin hada Hooyaday waxay go'aansatay inay mar kale banaanka u saarto maantana iyada ayaa uhoreysa iyadamaalinba maalinta ka dambaysa wayna igu cabsiineysaa inaan halkaas uga tago maxaa yeelay bisadaha ama bisadu way garaacday runtiina waa inuu aad u halaabay, ma garanayo sida loo difaaco boqol, ta, si fiican waxaan uga baqayaa inuu wax cuno ama waxbaa ku dhaca ama taa badalkeeda ma soo laabto, sababtaas awgeed ayaan halkaan u aaday, waxaan ku fikiray inaan tuuro laakiin xitaa marka hooyaday ma rabto gudaha ama guriga dhexdiisa, maxaan sameeyaa, fadlan si dhakhso leh ugu jawaab.
Ku jawaab Camila.
Isaga oo isaga ah ayaa xalka noqon lahaa. Waxay ka fogaan laheyd dhibaatooyinka ka dhasha habdhaqanka kuleylka (sida bisadaha kale ee la dagaallama), markii ay dhacdo waxay sidoo kale yareyn doontaa halista ah in xayawaanku ka tago.
Waa salaaman tahay, waxaan haystaa Siamese 5 bilood jir ah oo iyadu aad u hoy la’aan ah laakiin ma lihi aqal ii gaar ah oo aan ku xiro daaqadaha taasna waa ikhtiyaar kale oo kale si aysan u bixin wax guriga lagu sameeyo oo loo yaqaan daawo?
Ku jawaab nafta
Waxaa lagugula talinayaa inaad uxidho si loo tuuro, maxaa yeelay habkan ma lahaan doonto rabitaan badan ama uma baahna inay banaanka ka joogto.
Waxa kale oo aad shabag ku dhejin kartaa daaqadaha, kuwaas oo qiimahoodu aad u yar yahay isla markaana badbaadin kara nafta.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bisad yar oo 3 bilood jir ah iyo eey yar oo 1 jir ah, way is dulqaataan mararka qaarna way ciyaaraan way ogyihiin in labaduba ka mid yihiin gurigeyga ... su'aashaydu waxay tahay ... saaxiib fiican uma noqon karaa bisadeyda ama sidoo kale waxay noqon kartaa eey?
Ku jawaab Margarita Valencia
Salaan Margie ama Hello Margarite.
Taasi waxay kuxirantahay bisad walba. Si la mid ah sida aan yeelno, bisadaha oo dhami ma wada jecla bisadaha iyo eeyaha oo dhan.
Hadda, sidoo kale waxaan kuu sheegayaa haddii aad la heshiiso eeyga, gelinta bisad labaad inay wax walba dhici karto.
Mararka qaar way fiicantahay inaadan halista galin oo wax uga tagto sida ay yihiin.
Bisadaydu waxay ahayd guri -guri, wuu xanuunsaday waana inaan si xoog ah ku siiyaa dawo, halkaasna wuxuu ka bilaabay inuu noqdo mid baadi ah oo wax cuno uun, ma aqaan sida loo sameeyo inuu ku soo laabto mana sameeyo rabto inaad baxdo, fadlan i caawi
Ku jawaab Maru
Waa inaad ka faa'iidaysataa wakhtiga aad la qaadato. Agtiisa fadhiiso, si tartiib ah u salaax marka uu wax cunayo (iyo dhowr jeer oo kaliya, waa iska caadi in uusan ka tegin wax intaas ka badan), fur oo indhaha si tartiib ah u xir intaad fiirinayso (waa sidaad u sheeg inaad jeceshahay), fadhiiso ama ku seexo sariirta oo u yeer, la ciyaar kubad ama xarig.
Samir, waxaad ku soo ceshan kartaa kalsoonidoodii.
Marka kittens-ku bilaabaan inay is-nafiyaan
Maxaan sameeyaa haddii aan bisad ka helo albaabka gurigayga?